RIANKALO - MAMPANDRINIAINA Manitra - Tononkalo Malagasy - Serasera.org
RIANKALO - MAMPANDRINIAINA Manitra
Hafatra mifono teny vita an-tsary no efa nomeko anao foiny ianao vao nanokatra rindrin'efatrao amin'ny voadin'ny fitia. Nikatsaka ianao ka nahita, nahita ianao dia tsy nionona, tsy nionona ianao fa nandalina. Dia hainao ny atao hoe "fitiavana". Ankehitriny, voafehinao tanteraka ny toy ny antsafa ny zotra ombana ao anatin'izany, tsy ratsy io rehefa iainana amin'ny fahatsarana fa na izany aza mila fehezina ny hazo tokana. Noho ianao ianao efa mijoko miandalana mankany amin'ny ranjam-pitiavana no manosika ahy hatrany hisarika ny sainao hibanjina ny tena fiainana, dia tsy ny "izao" tsy akory fa ny "avy eo". Tsy sanatria hoe ny tena no ilo sy fiaratra fa mahatsiaro manana adidy noho ny ra iraisana ka tsy hay ny tsy hiloa-peo, isika no toa ilay mota maniry ambony salazana, asandrahaky ny lalany fa iray fiorenana ihany. Koa raha hitsinjo ny maitso ahitra, avadio ho ambioka ny ampahafolom-bokatra e!
Ry anabavikeliko vao mianatra miefona anatin'ny fitia,ity mba misy teniko,manjary sao ho neniko sy ho tsiniko amindry ny hikobonako azy, na efa efa mby an-kady ny antsamotady kely vao hifamelively Amin'ny tsiny sy ny tody. Tsaroan'ise moa izay teniko izay? Ny lehilahy tsy mba ratsy hoy ny fitenenana ! Satria ianareo vehivavy no tsy mahita afa-tsy tsara eny aminy rehefa sodoka ny lango malefany.
Noho izany: raha tiana ho tody ny lakana hitàna, avadio ahitana ny hatevin-damosiny, f'aza mora babon'izay rotsirotsiny, raha tiana hateza ny lamba tinafy, tsongoy izany tenony sao dia tsy mafy. Ka ianao koa raha handro amin'ny rano nandroiko, meteza hihaino fa ho porofoiko:
Tena misy fa tsy teny tonga ho azy ny ambodia mitafy hodi-janak'ondry a! Tsy manakana anao tsy hitia aho na misarika anao hiverina fa manome anao ohatra amin'ny maha voahary sarotra ambara antsika olombelona. Mila mahay mandrindra dia mila mahay mamindra dia mila mahay mamisa ary mila mahay manisa. Ataovy filamatra io ka raha tojo ny "iray" tsy miverina, mifindrà amin'ny "roa" fisampanana, raha sendra mpanao "telo moka" tsy misaina ny hena mamay, "efa tra-tra" mitsofa amin'izay, indraindray koa "dimi"asan'ny n'ny "enina", "fito-vana" iray enti-miaina hoe aza managam-paha"valo" "si vy" fo tsy mety mangoraka fa mahaiza mikolo dia aza misolo fa sarotra ny mila "fo lo"ha vaovao vao hifampizahana ka aleo tanana ny azo.
Ho feheziko ny teniko ranabavy eto am-pamaranana ny hafatro, ny vadin-joky hono kilolohan-jandry, ny vadin-jandry fananaran-joky, koa ataovy toy ny voankazo an'ala izay teniko izay, raha misy ny mamy,telemo, raha toa ka tsy izay, tsakotay... Dia etsy hifandray tanana an-tsoratra isika sy indriko fa ho very indray ny soa raha atao valala manjohy ny zavatra ambara.Veloma ise, tano ny fahamasinana, Misondrota haja amin'ny maha andriambavilanitra fara-tampom-boninahitra ny tena,
Sokajy : Fianakaviana
Mpanoratra : MAMPANDRINIAINA Manitra
Nampiditra : mampandrynyaina
Daty : 20/01/2021
Mpamangy : 294
MILA SETRINY ANY